Zvakajairika, zvine majee neshangu | Bezzia
Maria vazquez | 13/09/2021 18:00 | Chii chandinopfeka
Autumn iri kuswedera asi kuchine mazuva mazhinji, kana asiri ezhizha, ane tembiricha inonakidza yatichiri kufanira kunakidzwa nayo. Tinogona kuenderera mberi nekupfeka yedu mbatya dzinodikanwa dzezhizha uye gadzira kubva kwavari masitaera seaya ane majean neshangu dzatinofunga nhasi.
Kuchiri kukurumidza kwazvo kuti varege kudzoka shangu nematangi tangi, Kunyangwe kuchamhembe! Zvichida kuti pane dzimwe nguva hatipfeke hembe ine hurefu-refu, asi hatizodzinga machira ematangi nekukurumidza patinogona kuaisa pamusoro penguwo idzi nejaketi kuti tibate nemaawa anotonhorera ezuva.
3 Nguo dzepamusoro
Jeans inguo isingagumi; mwaka mina yegore inoperekedza isu. Mumwe nemumwe wedu ane zvatinoda uye ndidzo zvatichazoshandisa kugadzira zvipfeko zvisina kujairika zvine majean neshangu kuti tinakirwe nehupenyu hwezuva nezuva panguva ino yegore. Kunyangwe zvese zvichinzi zvitaurwe, zvese zvinoratidza kuti kudonha uku kuchave iwo marongero akajeka anozotora nzvimbo yepakati.
Chii chauri kuzoita masikati? Kana iwe uchizotama kubva pano uchienda uko iwe ungafarire kubheja neshangu dzakatetepa. Makore ano shangu dzerudzi rwefoshoro dzakave nebasa rinotungamira, kunyangwe vasiri isu tese kujairira kufamba nadzo. Kana iwe uri weboka rekupedzisira iri, unogona kusarudza kubheja neshangu dzine tambo dzakatetepa dzakasungirirwa pachidzitiro nezvitsitsinho zvakaderera kana zviri pakati.
Tine mikana yakawanda yekupedzisa dhizaini yedu. Basic t-shirts uye sweatshirts Ivo vanozove mubatsiri akanakisa kugadzira zvipfeko zvisina kujairika zvinonyaradza runyararo. Ehe, zvakare mahembe asina tambo, kunyange uchibatanidza izvi nezvakakodzera zvishongedzo iwe unogona kuwana gumi dhizaini yekubuda imwe masikati kana husiku sezvinoitwa naSheryl.
Iyo yezvirimwa misoro ine tambo ine ruffle ruzivo uye iyo chena pfuti sleeve mabhurauzi Iwo akakodzera kuti awane kutaridzika kwekudanana. Kunyangwe iwe ukabheja pahembe yakajeka uye raincoat unogona kuwana kwazvakarerekera kutaridzika, zvakangwara uye zvine mutsindo. Uye hongu, mabhurauzi uye mahembe ane mavara maruva anodhindwa zvakare sarudzo, mucherechedzo wekurwisa matsutso ari kuuya.
Iwe unoda here aya marudzi ezvipfeko ane majee neshangu? Chii chaunofarira?
Mifananidzo - @sincerelyjules, @collagevintage, @tineandreaa, @adelinerbr, @bartabacmode, @ cindy.octaviany, @karinemilyblog, @ frenchstyle.agi, @walkinwonderland
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » fashoni » Chii chandinopfeka » Kazhinji, ane majee neshangu
Zvikafu zvishanu zvekuvandudza matumbo ekufambisa